एका बिहानै पाथिभरामाताको दर्शन गर्दै भाद्र ३० गते मंगलबारको राशिफल पढ्नुहोस ! « गोर्खाली खबर डटकम
एका बिहानै पाथिभरामाताको दर्शन गर्दै भाद्र ३० गते मंगलबारको राशिफल पढ्नुहोस !
तुला राशि (र, रि, रु, रे, रो, ता, ति, तु, ते)सभासम्मेलनमा सरीक हुने अवसर प्राप्त हुनेछ । बिद्यार्थी वर्गका निम्ती समय त्यति उत्तम रहेको छैन । मध्यान पश्चात मेहेनत र परीश्रम को कदर हुन सक्ने योग रहेको छ । रचनात्मक कार्यमा समय ब्यतित रहनेछ । अध्यन अध्यापनका क्षेत्रमा समय उत्तम रहनेछ । मान्यजनहरुको साथ सहयोगमा अधुराकार्य हरु सम्पादित रहनेछन ।
मकर राशि (भो, ज, जि, खि, खु, खे, खो, गा, गि)मनोबिलासिताका सामान खरीद योग रहेको छ । कार्य क्षेत्रको लापरबाहिले सामान्य झन्झट आईपर्ला । मध्यान पश्चात खानपानमा बिशेष ध्यान दिनु होला । खुट्टा तान्ने ब्यक्ति बाट बच्नु पर्ने समय छ । मान्यजनहरु सगँको सम्बन्धमा सामान्य तिक्तता उत्पन्न हुन सक्नेछ । सामान्य बादबिवादको झमेलामा फसिने सम्भाबना रहेकोछ ।
मलेसिया बाट आयो सार्है दुःखद खबर सुतेकै ठाउँमा जीवन तामाङको मृत्यु